MakeUseOf ရဲ့ Guide books တွေကို ကို google လည်း အပေါ်မှာ တင်ပေးဖူးတယ် - တော်တော်များများ ကောင်းမှန်း သတိမထားမိကြဘူး - အင်္ဂလိပ်လို တွေ့ရင် တော်တော်များများက ဟင်ကနဲ လှည့်ထွက်သွား ကြတာများတယ် - အကြံပြုပါရစေ - အဲ့လို မလုပ်ကြပါနဲ့ - စမ်းဖတ်ကြည့်ကြပါ - MakeUseOf ရဲ့ Guide books တွေထဲက အရေးအသားတွေဟာ တော်တော်လေးကို ပျော့ပျော့ပျောင်းပျောင်း ရှိပါတယ် - ဖတ်ရလည်း လွယ်ပါတယ် - စာရေးသူတွေ အဓိကကျတဲ့ အချက်တွေကိုပဲ စာဖတ်သူ နားလည်လွယ်အောင် ကြိုးစားပြီး ရေးထားကြပါတယ်။ စာအုပ်တွေက အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ စာအုပ်တွေပါ - တကယ်ကို အကျိုးရှိတဲ့ စာအုပ်လေးတွေပါ - နင်ပတ်ကစ အထူကြီးတွေလည်း မဟုတ်ဘူး - တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ဖတ်ဖို့ အဆင်ပြေယုံလောက်လေးတွေ ရေးထားကြတော့ ဖတ်ရတာလည်း ပျင်းဖို့ မကောင်းဘူး - အနှစ်သာရတွေလည်း ပါတော့ ဖတ်နိုင်လေ အကျိုးရှိလေ ဆိုတာပြောဖို့တောင် လိုမယ် မထင်တော့ဘူး - ပိုပြောနေတယ် ထင်ရင် ခုပဲ ဒေါင်းလုပ်ချပြီး တစ်အုပ်လောက် စမ်းမြည်းကြည့်လိုက်ပါ။ ( တစ်ချို့ Guide books လေးတွေက MUO က မဟုတ်ပါဘူး - ကျွန်တော့်ဘာသာ ရှာပြီး စုထားတာလေးတွေပါ။ )
အောက်မှာ ဖော်ပြထားမယ့် Uploading sites တွေကတင် မဟုတ်ပဲ - http://www.makeuseof.com/pages/ မှာပါ Member တစ်ယောက် ဖြစ်ယုံနဲ့ စာအုပ်အားလုံး အလကား ဒေါင်းလုပ်ယူလို့ ရပါတယ်။
build-gaming-pc.pdf (1.5 MB)
FacebookPrivacy.pdf (3.3 MB)
google_earth_user_guide.pdf (2.1 MB)
how-to-build-pc.pdf (1.9 MB)
idiots-guide-to-photoshop.pdf (1.3 MB)
ims-introduction-wp.pdf (150 KB)
internet-guide-movie.pdf (2.3 MB)
Joomla-Guide-Final.pdf (2.5 MB)
Laptop-Buying-Guide.pdf (641 KB)
Mac_Automation.pdf (5 MB)
MakeUseOf.com_-_GarageBand.pdf (2.2 MB)
MakeUseOf.com_-_HackerProof_PC_Security.pdf (2.5 MB)
MakeUseOf.com_-_iPad_Guide.pdf (2.8 MB)
MakeUseOf.com_-_MS-Word.pdf (1.5 MB)
MakeUseOf.com_-_Photoshop_Part2.pdf (3.3 MB)
MakeUseOf.com_-_Searching.pdf (2.6 MB)
MakeUseOf.com_-_Shopping.pdf (1.5 MB)
MakeUseOf.com_-_Ubuntu_Karmic_Koala.pdf (1.4 MB)
MakeUseOf.com_-_WordPress.pdf (2.3 MB)
MakeUseOf.com_Windows_on_Speed.pdf (2.1 MB)
MakeUseOf.com-Dropbox.pdf (2.5 MB)
MakeUseOf.com-Your_PC_Inside_And_Out_Part_1.pdf (3.1 MB)
MakeUseOf.com-Your_PC_Inside_And_Out_Part_2.pdf (2.4 MB)
MakeUseOf_Guide_Digital_Photography.pdf (2.8 MB)
makeuseof_Windows_7_Guide_r2.pdf (2.8 MB)
MakeUseOf-file-sharing.pdf (2.5 MB)
MDOP_Datasheet_DRT_r1.pdf (190 KB)
media-center-guide.pdf (1.3 MB)
MUO-Network-Manual.pdf (1.6 MB)
MUO-productivity-guide.pdf (586 KB)
oreilly.repairing.and.upgrading.your.pc.mar.2006.rar (5.6 MB)
PC_Magazine.01.11.pdf (28.4 MB)
PSP-Downgrading-Upgrading-Guide.pdf (2.3 MB)
The-Big-Book-of-BitTorrent.pdf (819 KB)
The-Big-Book-of-iTunes.pdf (6.8 MB)
the-internet-manual-audiophile.pdf (4 MB)
the-iphone-guide.pdf (1.7 MB)
the-mac-manual.pdf (6.5 MB)
type-classification-ebook.pdf (2.8 MB)
USB_Guide.pdf (1.8 MB)
where-to-watch-movies.pdf (18 KB)
WinAtFarmvilleGuide.pdf (1.1 MB)
windows-mobile-guide.pdf (2.6 MB)
WP_Consumer_Password_Worst_Practices.pdf (387 KB)
အပေါ်က links တွေ အဆင်မပြေရင် ဒီအောက်က links တွေကနေ ယူပါ။
FacebookPrivacy.pdf (3.25 MB)
Ghost_10_User_Guide.pdf (1.23 MB)
google_earth_user_guide.pdf (2.15 MB)
how-to-build-pc.pdf (1.87 MB)
idiots-guide-to-photoshop.pdf (1.33 MB)
ims-introduction-wp.pdf (149.77 KB)
internet-guide-movie.pdf (2.27 MB)
Joomla-Guide-Final.pdf (2.51 MB)
Mac_Automation.pdf (5.04 MB)
MakeUseOf.com_-_HackerProof_PC_Security.pdf (2.54 MB)
MakeUseOf.com_-_iPad_Guide.pdf (2.82 MB)
MakeUseOf.com_-_MS-Word.pdf (1.49 MB)
MakeUseOf.com_-_Photoshop_Part2.pdf (3.32 MB)
MakeUseOf.com_-_Searching.pdf (2.62 MB)
MakeUseOf.com_-_Shopping.pdf (1.48 MB)
MakeUseOf.com_-_Ubuntu_Karmic_Koala.pdf (1.37 MB)
MakeUseOf.com_-_WordPress.pdf (2.33 MB)
MakeUseOf.com_Windows_on_Speed.pdf (2.12 MB)
MakeUseOf.com-Dropbox.pdf (2.47 MB)
MakeUseOf.com-Your_PC_Inside_And_Out_Part_1.pdf (3.07 MB)
MakeUseOf.com-Your_PC_Inside_And_Out_Part_2.pdf (2.43 MB)
MakeUseOf_Guide_Digital_Photography.pdf (2.85 MB)
makeuseof_Windows_7_Guide_r2.pdf (2.84 MB)
MakeUseOf-file-sharing.pdf (2.49 MB)
MDOP_Datasheet_DRT_r1.pdf (189.8 KB)
media-center-guide.pdf (1.29 MB)
microsoft-gone-google.pdf (271.95 KB)
MUO-productivity-guide.pdf (586.25 KB)
PSP-Downgrading-Upgrading-Guide.pdf (2.25 MB)
search-engine-optimization-starter-guide.pdf (4.12 MB)
The-Big-Book-of-BitTorrent.pdf (818.79 KB)
The-Big-Book-of-iTunes.pdf (6.82 MB)
the-internet-manual-audiophile.pdf (4.01 MB)
the-iphone-guide.pdf (1.74 MB)
the-mac-manual.pdf (6.45 MB)
twitter-guide.pdf (2.44 MB)
type-classification-ebook.pdf (2.83 MB)
USB_Guide.pdf (1.84 MB)
where-to-watch-movies.pdf (18.13 KB)
WP_Consumer_Password_Worst_Practices.pdf (386.67 KB)
oreilly.repairing.and.upgrading.your.pc.mar.2006.rar (5.64 MB)
5:24 AM LeaveaComment Read More
အောင်မြင်တဲ့ ဘဝတစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့ ဆိုတာ ကိုယ်လုပ်ဆောင်စရာရှိတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာ မှန်သမျှကို အားသွန်ခွန်စိုက် မနားမနေ ကြိုးပမ်း လုပ်ဆောင်နေယုံ တစ်ခုတည်းနဲ့ မပြီးမြောက်ပါဘူး - အဲလို စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါ လုပ်ငန်းတိုင်းကို ခဏချင်း ပြီးမြောက်နိုင်ဖို့ဆိုတာ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က ပြည့်ဝတဲ့ ကြံ့ခိုင်မှု ရှိနေဖို့လိုပါတယ် - မြန်မာ အမျိုးသား လူငယ်ထု နဲ့ အမျိုးသမီးလူငယ်ထု အများစုဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံတွင်းမှာ နေရင်သာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အကောင်ကြီးလြှပီ ထင်တာ - တကယ်တမ်းနိုင်ငံတကာ နယ်ပယ်ကို ဝင်လာတဲ့ အခါမှာ အရပ်အားဖြင့် - ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်အားဖြင့် တစ်ခြားနိုင်ငံသားတွေနဲ့ လုံးဝ မယှဉ်သာနိုင် လောက်အောင် သေးကွေးကြပါတယ်
ကျွန်တော်လည်း မြန်မာမှာရှိခဲ့စဉ်က ဘတ်စ်ကားပေါ်တက်လိုက်ရင် အမိုးနဲ့ ထိလွန်းလို့ ခေါင်းငုံပြီး နေနေရတာကို ငါ့အရပ်မြင့်လှချည်ရဲ့လို့ ကျိတ်ပျော်နေခဲ့တာ ( တကယ်တမ်း ဘတ်စ်ကားအမိုးက ဘယ်လောက်မှမှ မမြင့်တာ ) - တကယ်တမ်း သူများနိုင်ငံရောက်မှ ကိုယ့်အရပ်က အဖြစ်စလောက်ဆိုတာ သတိထားမိတယ် - ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ မြန်မာအမျိုးသား လူငယ်ထုနဲ့ အမျိုးသမီးထု တစ်ရပ်လုံး နီးပါးက အားကစားမလိုက်စားကြဘူး - မလိုက်စားကြတာ ကလည်း အပြစ်တော့ မဟုတ်ဘူး - မိရိုးဖလာကိုက မလိုက်စားတာ - ကျွန်တော့်အဖေ မနက်မိုးလင်းလို့ လေ့ကျင့်ခန်းဆင်း ကိုယ်လက်အကြောလျော့ လုပ်တယ်ဆိုတာ တစ်သက်မှာ တစ်ခါမှ မတွေ့ခဲ့ဖူးသလို - ကျွန်တော့်အမေလည်း ဝိတ်ချမယ် ဘော်ဒီထိန်းမယ်ဆိုပြီး ရွရွလေး ပြေးတာမျိုးလောက် လုပ်တာကို တစ်ခါမှ မမြင်မိဖူးဘူး -
အဲလိုနဲ့ ဘာအားကစားမှ မလုပ် - ရုန်းကန်နေရလို့သာ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်က သိသိသာသာကြီး ပုံမပျက်သေးတာ အရွယ်ရလာတာနဲ့ အမျှ အိမ်ထောင်တွေကျ ကလေးတွေရနဲ့ မလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ အရွယ်လည်း ရောက်ရော တဖြည်းဖြည်း ပုံပျက်လာကြရော - အထူးသဖြင့် မြန်မာမိန်းကလေးများ ပိုပြီး ခံယူချက် မှားယွင်းနေကြတာ တွေ့မိပါတယ် - အိမ်ထောင်ကျသွားရင် အိမ်ထောင့်တာဝန် ယောကျာင်္းတာဝန် ကလေးတာဝန်နဲ့ တာဝန်များရင် များသလို ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ကိုယ် ဂရုမစိုက်ပဲ လျော့တိလျော့ရဲ နေလာကြတာ သတိထားမိတယ် - ဘယ်လောက်ဝဝ - ဝချင်သလောက် ဝပါစေ - ဘယ်သူမှလည်း ငါ့လာကြိုက်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး - ငါ့ယောကျာင်္းနဲ့ ငါ ဆိုပြီးများ ခံယူထားကြသလား မသိ - ကျွန်တော် သူများနိုင်ငံမှာ ကလေးသုံးလေးယောက် လောက် မွေးထားပြီးတဲ့ထိ အပျိုတစ်ယောက် လို ခန္ဓာကိုယ် အလှမပျက်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ တွေ့ဖူးတယ် - မြန်မာမိန်းကလေးတွေ ကတော့ ကလေး ( ၁ ) ယောက်လောက် မွေးပြီးရင်ကို အသိအမှတ်ပြုလောက်အောင် ပုံပျက်သွားပြီ - ဒါကို ဘယ်မြန်မာ အမျိုးသမီးမှလည်း အလေးသိပ်ထားတာ မတွေ့ရသလို - ဘယ်အိမ်ထောင်ရှင် မြန်မာအမျိုးသား ကမှ ကိုယ့်အမျိုးသမီး ကို ကျန်းမာရေး လိုက်စားဖို့ တိုက်တွန်းရကောင်းမှန်း သတိမရကြဘူး - ( သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း မလိုက်စားကြတာ ပါတယ် ) - နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ မျိုးဆက်ဆိုတာ သိပ်အရေးကြီး သလို - ကိုယ့်ကျန်းမာရေးနဲ့ ခန္ဓာကိုယ် တည်ဆောက်မှု ဆိုတာကလည်း ကိုယ့် အနာဂတ်အတွက် သိပ်ကို အရေးကြီးပါတယ် -
လူတိုင်း လူတိုင်းက နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ စားဝတ်နေရေးအတွက် လှုပ်ရှား ရုန်းကန်နေရတော့ အားကစားဆို တာကို စိတ်ကူးယဉ် အိပ်မက်တစ်ခုလိုပဲ သဘောထားနိုင်ပြီး လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ဖို့ လူမကူးနိုင်ကြတာ ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ် - ဒါပေမယ့် အားကစားဆိုတာ အားမှ ကစားလို့ ရတာ မဟုတ်ပါဘူး - နေ့စဉ် ကိုယ်စားသုံးနေတဲ့ အစာအာဟာရတွေကနေလည်း ကိုယ့် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အာဟာရဓာတ်နဲ့ ပြည့်စုံပြီး ကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးစေမယ့် အစာအာဟာရကို စားသုံးခြင်း အားဖြင့်လည်း အချိန်မကုန်ပဲ ကျန်းမာရေးလိုက်စားရာ ရောက်ပါတယ် - နောက်ပြီး တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ အွန်လိုင်းမှာ အင်တာနက် သုံးပြီး လည်ပတ်နေကြတဲ့ လူငယ်တွေ - စားလည်း ကွန်ပြူတာရှေ့ - အိပ်လည်း ကွန်ပြူတာရှေ့နဲ့ တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ ဘာမှမလှုပ်ရှားပဲ ကွန်ပြူတာရှေ့မှာ နေနေတာဟာ မိမိ ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာရေးနဲ့ မျက်စိအမြင်အာရုံကို ဘယ်လောက်တောင် ချို့တဲ့စေလဲ ဆိုတာ သတိထားမိကြပါရဲ့လား -
အားကစားလို့ ဆိုလိုက်ရင် ဘောလုံးကန်တာ ခြင်းခတ်တာ အပြေးလေ့ကျင့်တာလောက်ကို အားကစားလို့ ခံယူနေကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူငယ် အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးထု အတွက် -
- လေ့လာသင့်တဲ့ အခြေခံ အားကစား ( ကာယဗလနဲ့ ကာယအလှ )
- စားသောက်ပုံ နည်းစနစ်
- ပြုလုပ်သင့်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း အစုစုနဲ့
- ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ အပြုအမူတွေကို
MyanmarFitness.com က စာရေးဆရာ နဲ့ ကာယဆရာ ကိုနိုင်ဦး - ကိုနိုင်ဝေဝင်း နဲ့ အခြား ကာယဆရာများ မြန်မာလို ပြုစုရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်တွေကို ရှာဖွေစုဆောင်းပြီး မြန်မာမိသားစု လူငယ်ထု အတွက် လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်ပါတယ် -
Free ebook of supplements
ဒီစာအုပ်တွေ ဖြစ်မြောက်လာဖို့ အားသွန်ခွန်စိုက်နဲ့ စိတ်ရောကိုယ်ပါ နှစ်ပြီး ရေးပေးနေတဲ့ ကိုနိုင်ဦး - ကိုနိုင်ဝေဝင်းနဲ့ အခြားသော စာရေးဆရာများ အားလုံးကို ဒီနေရာကနေပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပြောခဲ့ချင်ပါတယ် - ဝါသနာရှင် ညီငယ် ညီမငယ်များ MyanmarFitness.com မှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အကျိုးပြုဆောင်းပါးများ သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသေးတယ် -
မြန်မာလူငယ်များ ပျော်ရွှင်တဲ့ ဘဝ - သန်စွမ်းကျန်းမာ စိတ်ခန္ဓာနဲ့ - မိသားစု အကျိုး - နိုင်ငံအကျိုးကို ဆထက်တပိုး သယ်ပိုး ရွက်ဆောင် နိုင်ကြပါစေ -
2:41 AM LeaveaComment Read More
စာရေးချင်စိတ် မရှိလို့ အသုံးလိုသူ အတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် စက်ထဲက Marine Engineering စာအုပ်လေးတွေ မျှဝေလိုက်ပါတယ် - Marine Engineer တွေ - ရေကြောင်းပညာနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ် လုပ်ကိုင်နေသူတွေ - Marine Engineering ဘာသာရပ်ကို သင်ကြားလေ့လာနေသူတွေ အသုံးတည့်မှာပါ -
001 Load Generation Strategy for Propeller Induced Pressure Fluctuations.pdf (1.9 MB) http://www.multiupload.com/CXVME1DSR7
002 Constraint Management for Marine Design Applications.pdf (677 KB)
005 Design Operation Regulation for Safety - SAFEDOR.pdf (400 KB)
Advanced Gas Turbine Cycles.pdf (5 MB)
AotS_Armed_Transport_Bounty_1787.pdf (13 MB)
AotS_HMS_Beagle_1817.pdf (67.5 MB)
AotS_The ships of Christopher Columbus.pdf (135.2 MB)
AotS_Ship_Blandford_1739.pdf (45.2 MB)
AotS_Pandora_1778.pdf (60.1 MB)
AotS_Essex_1799.pdf (116.5 MB)
Basic_ship_theory_vol01-K.J.Rawson and E.C.Tupper.pdf (4.2 MB)
Dictionary_of_Engineering-2E.pdf (5.5 MB)
DSTO-TR-1622.pdf (5 MB)
Gas Turbine Engineering Handbook 2ed.pdf (10.3 MB)
Guide to Ship Repair Estimates.pdf (1 MB)
IC engines.pdf (131.4 MB)
Intro_to_Naval_Architecture_3E.pdf (19.3 MB)
Introduction_to_Marine_Engineering.pdf (34.6 MB)
Marine_Structural_Design.pdf (14.1 MB)
Merchant Ship Construction.pdf (57.1 MB)
P rac t i cal ship design.pdf (25 MB)
Practical Ship Hydrodynamics.pdf (2.2 MB)
Principles of naval architecture I SNAME.pdf (28.9 MB)
Ship Construction.pdf (17.1 MB)
Ship Design for Efficiency and Economy (Second Edition.pdf (1.7 MB)
Ship_Design___Construction.pdf (29.8 MB)
Ship_Stability_for_Masters_and_Mates_5E.pdf (5.7 MB)
Standard Handbook of Petroleum & Natural Gas Engineering.pdf (32.5 MB)
Tanker_Safety_Guide_Chemicals_published_by_International_chamber_of_Shipping.pdf (58.9 MB) http://www.multiupload.com/3Q0VQX677N
The Ocean Engineering Handbook.pdf (9.2 MB)
The_Marine_Electrical__Electronics_Bible_Jhon_Payne.pdf (9.1 MB)
Theory & Design of Air Cushion Craft.pdf (45.8 MB)
Tribology in Machine Design.pdf (7.9 MB)
8:56 PM LeaveaComment Read More
2:52 PM LeaveaComment Read More
kothu1987 က အသုံးပြုနည်း စာအုပ်လိုချင်တယ် ဆိုလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စက်ထဲမှာ ဆောင်ထားသမျှလေးကတော့ ဒါအကုန်ပါပဲ - နောက်ထပ် တစ်ခြား ကောင်းနိုးရာရာ Windows7စာအုပ်လေးတွေ ရှိလာရင်လည်း ဒီမှာပဲ ဖြည့်တင်ပေးသွားပါ့မယ်။ အင်္ဂလိပ်လို ရေးထားတယ်ဆိုပေမယ့် တစ်ချို့စာအုပ်တွေက ရုပ်ပုံတွေနဲ့ တစ်ကွ တစ်ဆင့်ချင်း မြှားထိုးရှင်းပြထားတာ မို့လို့ လေ့လာချင်တဲ့ သူတစ်ယောက်အတွက် အရမ်းကို အဆင်ပြေစေပါတယ်။ တစ်ခြား မိသားစုဝင်တွေ အနေနဲ့ ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ Windows7Ebooks လေးတွေကိုလည်း ဒီနေရာမှာ ရှယ်ပေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။
400MB ကျော်ကျော်လောက်ရှိပြီး ဒေါင်းလုပ်ချလိုက်ရင် ရရှိလာမယ့် စာအုပ်တွေကတော့ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းပါ။
The Complete Windows7Shortcuts.pdf
Windows7For Dummies Quick Reference Sep 2009.pdf
Windows7Inside Out (10-2009).pdf
Windows7Inside Out Early Content.pdf
Windows7Just the Steps for Dummies (2009).pdf
Windows7Pocket Guide v.1. 2009.pdf
Windows7Secrets.pdf
Windows7Simplified.pdf
Windows7Teach Yourself Visually.pdf
Windows7The Definitive Guide (Oct.2009).pdf
Windows7Tweaks.pdf
Windows7Ultimate Guide - Computer Active - December 2009.pdf
Windows 7.part01.rar (47.7 MB)
Windows 7.part02.rar (47.7 MB)
Windows 7.part03.rar (47.7 MB)
Windows 7.part04.rar (47.7 MB)
Windows 7.part05.rar (47.7 MB)
Windows 7.part06.rar (47.7 MB)
Windows 7.part07.rar (46 MB)
1:42 AM LeaveaComment Read More
စာရေးဆရာမ ဂျူးကို ရင်းနှီးခဲ့တာ အလယ်တန်း ကျောင်းသား ဘဝလောက်က ဖြစ်မယ်လို့ ထင်မိတယ် - ပထမဆုံး စဖတ်ဖြစ်တာ ဘယ်ဝတ္ထုမှန်း မမှတ်မိတော့ပေမယ့် အမြဲတမ်း အမှတ်တရ ရှိနေတဲ့ ဝတ္ထု တစ်ပုဒ်ကတော့ သူ့ရေးခဲ့တဲ့ " အမှတ်တရ " -
ဂျူး ဝတ္ထုကို သဘောမကျတဲ့ သူတွေလည်း ရှိသလို သဘောကျတဲ့ သူတွေလည်း ရှိတယ် - အဲ့ဒီ့ မတူညီတ့ဲ ကွာခြားချက် နှစ်ခုကြားမှာ ကျွန်တော်က ဂျူး ဝတ္ထု အသစ်တွေ့တိုင်း အမြဲ ဖတ်ဖြစ်တဲ့ သူ တစ်ယောက်ပေါ့ - တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ယောကျာင်္းတစ်ယောက်ရဲ့ အသုံးမကျပုံကို မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ခြေဖျားအောက်မှာ ပြားပြားဝပ်လောက်အောင် အပြတ်အသတ် နင်းချေဖော်ပြတတ်တဲ့ ဂျူးရဲ့ အရေးအသားက တစ်ခါတစ်လေ ကျပြန်တော့လည်း ယောကျာင်္းတစ်ယောက်ရဲ့ သိမ်မွေ့နက်ရိှုင်းတဲ့ အချစ် အကြောင်းကို ယောကျာင်္းတစ်ယောက်ကိုယ်တိုင် မတွေးမိတတ်လောက်အောင် အနုစိတ်ချယ်မှုန်း တတ်သေးတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ ယောကျာင်္းမကောင်းကြောင်းရေးတာ ဖတ်မိရင် အသံမထွက်ပဲ တိတ်တဆိတ်ကျိန်ဆဲ မိပြီး - ကောင်းကြောင်းရေးပြပြန်ရင် စာလုံးတစ်လုံးချင်းကို ဤသည်၍မလွဲဖတ် " ငါက ဒီလိုမျိုး ဟုတ်တယ်" ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အမွှမ်းတင် ကြည်နူးမိတတ်သေးတဲ့ ကျွန်တော့် အတွက်တော့ ဆရာမ ဂျူးရဲ့ ဝတ္တုတွေဟာ ရသမျိုးစုံ ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ အဖော်ကောင်းတွေပါပဲ။
အခုလည်း မြန်မာမိသားစုမှာ ဂျူးရဲ့ ဝတ္ထုတိုများ ကဏ္ဍကို တွေ့မိလို့ ခဏ ဝင်ကြည့်မိတယ်။ အင်တာနက်ထဲမှာ ရှိထားသမျှ တော်တော်များများ စုံနေတာ တွေ့ရလို့ ကြည်နူးမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်မှာ မြန်မာမိသားစုမှာ ရှိမနေသေးတဲ့ တစ်ခြား ဂျူးရဲ့ ဝတ္ထုတိုလေးတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ ဂျူး ဝတ္တုကို နှစ်သက်ကြသူများ - ဂျူးရဲ့ အရေးအသားကို ခုံမင်သူများ အတွက် ခံစားနိုင်အောင် တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်တွေဟာ ကျွန်တော် ရိုက်ထား တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆရာမဂျူးရဲ့ Facebook Fanpage က Notes တွေကနေ ကျွန်တော် Word ထဲကို Copy ပြန်ကူး စာကြောင်းတွေ ပြန်ညှိ PDF ပြောင်းပြီး သိမ်းထားတဲ့ စာအုပ်တွေပါ။ Facebook Fanpage က ကူးထားတာမို့လို့ သူ့နေရာမှာ ဖော်ပြထားသမျှ Credit ပေးထားတဲ့ Links တွေက အစ တစ်ခု မကျန် အကုန်ကူးယူ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ဆရာမဂျူးရဲ့ Facebook Fanpage မှာ Fan လုပ်ထားချင်တယ်ဆိုရင် အောက်က Link ကနေ သွားနိုင်ပါတယ်။
ဆရာမ ဂျူးရဲ့ Facebook Fanpage
ဆရာမ ဂျူး ရဲ့ ဝတ္ထုတိုတွေကို ဝေမျှတဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော် PDF files တွေ အပြင် Word file ကိုပါ ပူးတွဲ ထည့်သွင်းပေး လိုက်ပါတယ်။ အကြောင်းက ကိုယ့်ဘာသာ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြီး အလှဆင်ချင်သူတွေ - ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့် Blog အသီးသီးမှာ ထပ်မံ ဖော်ပြချင်သူတွေ အတွက် အဆင်ပြေနိုင်အောင်ပါ။
ကျွန်တော့်နာမည် မဖော်ပြရင်နေပါ - Word ထဲမှာ ဖော်ပြထားပြီးသား သက်ဆိုင်ရာ မူရင်း ရေးသား ရိုက်နှိပ်သူတွေကို Credit ပေးဖို့တော့ အနူးအညွှတ် မေတ္တာရပ်ခံ ပါရစေ။
ပါဝင်မယ့် စာအုပ်တွေကတော့ အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အေးအေးဆေး ဆေး စာဖတ်ချင်သည်.pdf
အေးအေးဆေး ဆေး စာဖတ်ချင်သည်.docx
အခုတော့ ကျွန်တော့်ကို လာခေါ်ကြပြီ.pdf
အခုတော့ ကျွန်တော့်ကို လာခေါ်ကြပြီ.docx
လကိုဖမ်းဖို့ ပိုက်ကွန်ယက် ကြရအောင်.pdf
လကိုဖမ်းဖို့ ပိုက်ကွန်ယက် ကြရအောင်.docx
ရာဇဝင်ထဲမှာ မောင့်ကိုထားရစ်ခဲ့သူနှင့် တွေ့ဆုံပေးခြင်း.pdf
ရာဇဝင်ထဲမှာ မောင့်ကိုထားရစ်ခဲ့သူနှင့် တွေ့ဆုံပေးခြင်း.docx
မြို့တော်မှာ နေရတဲ့ဘဝ (Life in City).pdf
မြို့တော်မှာ နေရတဲ့ဘဝ (Life in City).docx
မိန်းမနှစ်ယောက်.pdf ( မြန်မာမိသားစု တွင် ဖော်ပြထားပြီး )
ကျွန်မဖတ်ခဲ့ သော စာအုပ်များ.pdf
ကျွန်မဖတ်ခဲ့ သော စာအုပ်များ.docx
ကျွန်မကိုပြန် ကြည် ့နေတဲ့ ကျွန်မရဲ ့အရိပ်.pdf
ကျွန်မကိုပြန် ကြည် ့နေတဲ့ ကျွန်မရဲ ့အရိပ်.docx
Juu - Short Stories.rar (16.38 MB)
Juu - Short Stories.rar 16.378 MB
6:44 PM LeaveaComment Read More
အပေါ်မှာ တင်ပေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေနဲ့ တူမတူတော့ ကျွန်တော် တစ်အုပ်ချင်း တိုက်မစစ်ပေးလိုက်နိုင်တာ တောင်းပန်ပါတယ် - စာအုပ်တွေက တော်တော်များနေလို့ပါ။ အရေးတကြီး လိုနေမယ့် ဒါမှမဟုတ် လေ့လာချင်တဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ အတွက် လေ့လာလို့ လွယ်အောင် ကျွန်တော့်မှာ စုထားသမျှ စာအုပ်တွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တစ်အုပ်ချင်း ခွဲတင်မပေးနိုင်တာကိုတော့ နားလည်ပေးပါ - ကျွန်တော့်လည်း တစ်ခြား အလုပ်လေးတွေ ရှိသေးလို့ပါ။ တကယ်လို့ အောက်ဖော်ပြပါ စာအုပ်အားလုံးကို Download ချမှ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ စာအုပ်လေး ၄ - ၅ အုပ်လောက်ပဲ ရမှာ မျိုး ဖြစ်နေရင်တော့ ကျွန်တော့် MF mail levendreams@myanmarfamily.org ကို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ စာအုပ်လေးတွေရဲ့ နာမည်ရွေးထုတ်ပြီး အကူအညီ တောင်းခံနိုင် ပါတယ်။ ( အမှန်တကယ် လိုအပ်သူများအတွက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ )
Download ပြီးဆုံးရင် ရရှိမယ့် စာအုပ်စာရင်းကတော့ အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်းပါ။ ဒါ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုက တစ်အုပ်တည်း မဟုတ်ပါဘူး သူ့အောက်မှာ တစ်ချို့ folder တွေက အထဲမှာတင် စာအုပ် ၄ - ၅ အုပ်ခွဲထားတာတွေ ပါပါသေးတယ်။
1:59 PM LeaveaComment Read More
ခုခေတ် ခုကာလ အခြေအနေကြီးမှာ ကျောင်းသား တစ်ယောက်သာ ဖြစ်ရမယ်ဆိုရင် တကယ်ကို မလွယ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ ?? ပညာသင်စရိတ်တွေက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကြီးမြင့်လာသလို - သက်ဆိုင်ရာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဘာသာရပ်အလိုက် Textbooks တွေရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ကလည်း တကယ်ကို အံ့မခန်း တရိပ်ရိပ်တက်လာလို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့တွေမှာ တစ်ခုခုကို သိချင်ရင် လေ့လာချင်ရင် Ebooks တွေကို အားကိုးလာရတယ်။ ကိုယ်မသိတာရှိတိုင်း တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အချိန်ပြည့် မေးမြန်းနေဖို့ဆိုတာလည်း တကယ်တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူ။ တစ်ဖက်လူမအားလပ်တဲ့ အချိန်တွေ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် - ကိုယ်သိချင်တာကို သူသေသေချာချာ မဖြေနိုင်တာမျိုးတွေလည်း ရှိချင်ရှိမယ်။ အကောင်းဆုံးက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အားကိုးပြီး စာဖတ်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
အဲလို စာဖတ်နိုင်ဖို့ ဆိုရင် စာအုပ်တွေ လိုလာပြီ။ တတ်သိနားလည်သူ တစ်ယောက်အတွက် အင်တာနက်ထဲမှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ရှာဖွေရတာ ဘယ်လောက်မှ မကြာမြင့်ပေမယ့် တစ်ချို့ အင်တာနက်နဲ့ စိမ်းနေဦးမယ့် မြန်မာမိသားစုဝင်တွေ အတွက် ပညာရပ်ပိုင်းဆိုရာ စာပေဗဟုသုတတွေ ရှာမှီးနိုင်ဖို့ အလကားရယူနိုင်တဲ့ စာအုပ် Site တစ်ချို့ဆီ ကျွန်တော်လမ်းညွှန် ပေးချင်ပါတယ်။ အင်တာနက်ထဲမှာ Freedownload ရယူနိုင်တဲ့ စာအုပ် Site ပေါင်း မြောက်များစွာ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ညွှန်ပြတဲ့ Site တွေက အကောင်းဆုံး စာအုပ် Site လို့ ကျွန်တော် မဆိုလိုပါ။ လူသိနည်းနေသေးတဲ့ Site ကောင်းတစ်ချို့ကို မှတ်သားထားနိုင်စေဖို့ ကျွန်တော် မျှဝေခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခုအောက်မှာ ဖော်ပြသွားမှာကတော့ Free textbooks တွေ ရယူနိုင်မယ့် နေရာကောင်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ အဖိုးတန် textbooks များ မည်သည့်နေရာတွင် အလကား ရရှိနိုင်ပါသနည်း။
BookBoon ဆိုတာ European universities တွေရဲ့ academics အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး PDF textbooks တွေကို ရွေးချယ်စုဆောင်းထားတဲ့ website တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ Site မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Marketing ကနေစပြီး Biology အပါအဝင် အရာအားလုံးဟာ 100% legal ဖြစ်ပြီး အဲ့စာအုပ်တွေကို သူ့ Site ရဲ့ facebook app ကနေလည်း တိုက်ရိုက် ဒေါင်းလုပ်ချနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။
၂။ Computer science နှင့် programming textbooks များ မည်သည့်နေရာတွင် အလကား ရရှိနိုင်ပါသနည်း။
FreeTechBooks ဆိုတာ computer science နဲ့ programming books တွေကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရှာဖွေနိုင်တဲ့ Site တစ်ခုဖြစ်သလို သူ့မှာ ရှိနေတဲ့ စာအုပ်အားလုံးကို freely & legally အနေနဲ့လည်း ရယူနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခြား Site တွေကလို တရားမဝင်တဲ့ စာအုပ်မျိုး ၊ Links မျိုးတွေ မရှိသလို အမြဲတန်းလည်း topics တွေအလိုက် ပုံမှန် updated ဖြစ်နေပြီး download ချနိုင်တဲ့ books တွေကြောင့် မှတ်သားထားသင့်တဲ့ Site တစ်ခု ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
၃။ Medical textbooks များအား မည်သည့်နေရာတွင် အလကား ရရှိနိုင်ပါသနည်း။
လတ်တလော အနေနဲ့ medical texts ပေါင်း ၃၀၀ ကျော်မက လက်ရှိရှိနေတဲ့ Freebooks4Doctors ဟာ ပုံမှန် PDF ebooks တွေကိုသာမက Journals တွေ - တစ်ခြား free ပေးထားတဲ့ medical books တွေရှိရာ ဆီကိုပါ Links တွေ ချိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့ medical books တွေ လိုအပ်နေသူတွေ အတွက်တော့ စာပေဟင်းလေးအိုးကြီး သဖွယ် ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် ယုံကြည့်မိပါတယ်။
၄။ University textbooks များ မည်သည့်နေရာတွင် အလကား ရရှိနိုင်ပါသနည်း။
University for Free ဆိုတာကတော့ ကျောင်းသားတွေ ကိုယ်တိုင် တည်ဆောက်ထားတဲ့ Site တစ်ခု ဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကို ကျောင်းသားအချင်းချင်း မျှဝေနိုင်အောင် စီစဉ်ဖန်တီးထားတဲ့ Site ကောင်းတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ တက္ကသိုလ်အသီးသီးရဲ့ များပြားလှတဲ့ သင်ရိုးတွေအလိုက် မဖြစ်မနေ လိုအပ်မယ့် စာရွက်စာတမ်းတွေကို ဝေမျှနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာ ဖိုရမ် တစ်ခုလည်း ရှိပြီး အဲ့ဒီဖိုရမ်ကနေ တစ်ဆင့် ကျောင်းသား အချင်းချင်း ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးနီှးနှော ဖလှယ်မှုတွေ - ဘယ်နေရာမှာ နောက်ထပ် အသုံးဝင်မယ့် resources တွေ ရှိဦးမလဲ ဆိုတဲ့ မျှဝေမှုတွေကို ဝင်ရောက် ရယူနိုင်ပါတယ်။
၅။ Online တွင် free textbooks များ မည်သည့်နေရာတွင် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသနည်း။
Flat world ဆိုတာ educational ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက် ရည်ရွယ်ထားတဲ့ Site တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ကျောင်းသားတွေကို သူတို့ လေ့လာချင်ရာ အကြောင်းအရာအလိုက် စာအုပ်စာတန်းတွေကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ Site တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်အားလုံးကိုလည်း online မှာဖတ်ရှုဖို့ free ပေးထားပြီး ၊ တကယ်လို့ ကိုယ်ပိုင် စာအုပ်အနေနဲ့ ရယူချင်သူများ အတွက်လည်း သက်သာတဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ အားလုံးထဲမှာ အဆင်အပြေဆုံး ဖြစ်အောင် စီစဉ်ပေးထားတဲ့ အချက် တစ်ချက်ကတော့ ကျောင်းသား တစ်ယောက်ယောက်ဟာ စာအုပ်တစ်အုပ်လုံးကို မဝယ်ယူချင်ဘူး ဆိုရင်တောင် သူလိုအပ်တဲ့ chapters တစ်ခုချင်းစီ အလိုက် ပိုင်းခြား ဝယ်ယူနိုင်ခြင်းပါပဲ။ ( Online မှာပဲ ဖတ်မယ် ဆိုရင်တော့ အားလုံး တစ်အုပ်လုံးကို Free ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ )
၆။ ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်လို့ ရသည့် Textbooks များ မည်သည့်နေရာတွင် အလကားရရှိနိုင်ပါသနည်း။
Wikibooks ဆိုတာ Wikimedia community ကနေ ဖန်တီးထားပြီး မည်သူမဆို ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်နိုင်အောင် ဖန်တီးပေးထားတဲ့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ free library တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကြေးတန်ဖိုး မြင့်မားတဲ့ စာအုပ်တွေထက်စာရင် Wikibooks တွေဟာ အလွယ်တကူ copy လုပ်နိုင် ၊ ပြင်ဆင်နိုင် ၊ တစ်ခြားသူတွေအတွက်ပါ အလကားဖြန့်ဝေနိုင်တာမို့ သဘောကျစရာ ကောင်းလှပါတယ်။
၇။ Highschool Textbooks များ မည်သည့်နေရာတွင် အလကားရရှိနိုင်ပါသနည်း။
FHSST or Free High School Science Texts ဆိုတာ နိုင်ငံခြား တက္ကသိုလ်တွေမှာ တက်ရောက်နေတဲ့ Grades 10 ကနေ 12 ကလေးငယ်များအတွက် သိပ္ပံနဲ့ သချာင်္ဆိုင်ရာ textbooks တွေကို free ရယူနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြား တက္ကလိုလ်လို့ ဆိုပေမယ့် တကယ်တမ်း လေ့လာမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်သားသမီးလေးတွေအတွက် အဆင့်မြင့် ပညာတွေ လေ့လာနိုင်စေဖို့ ညွှန်ပြနိုင်တဲ့ Site တစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ တောင်အာဖရိက နိုင်ငံမှာ တက်ရောက်နေတဲ့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ သင်ရိုးအတွက် အဓိက ဦးတည်ချက် ထားတာ ဖြစ်ပြီး - နိုင်ငံတကာက ကျောင်းသားလူငယ်တွေ အတွက်လည်း အသုံးတည့်တဲ့ website တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၈။ ကဏ္ဍစုံလင်သည့် စာအုပ်ပေါင်းစုံအား မည်သည့်နေရာတွင် တစ်နေရာတည်း ဖတ်ရှု့လေ့လာ နိုင်ပါသနည်း။
Scribd သူကတော့ ကျွန်တော် အမြဲ ဖတ်ဖြစ်နေကျ Site တစ်ခုပါပဲ။ စာအုပ်ပေါင်းစုံကို တစ်နေရာတည်းမှာ ရသစုံစုံလင်လင်နဲ့ ဖတ်ရှု့နိုင်သလို uploader ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ပေါ် မူတည်ပြီး စာအုပ်တော်တော်များများကိုလည်း free download ရယူနိုင်ပါသေးတယ်။ အရင်တုန်းကဆိုရင်တော့ Download ရယူဖို့ အတွက်ဆိုရင် Account တစ်ခု အသင့်ရှိနေဖို့ လိုအပ်ပြီး ခုချိန်မှာတော့ Facebook account ရှိသူတိုင်းအတွက် နောက် Account တစ်ခု create လုပ်စရာ မလိုပဲ အသင့်သုံး အနေအထားနဲ့ အသုံးပြုနေနိုင်ပါပြီ။
မြန်မာမိသားစုဝင်များ စာပေဗဟုသုတ ဆထက်တန်ပိုး တိုးတက်နိုင်ကြပါစေ။
11:51 PM LeaveaComment Read More
IELTS and TOEFL exams တွေဆိုတည ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာရပ်ကို လေ့လာနေကြတဲ့ ၊ ဆက်စပ်ပတ်သတ် နေကြတဲ့ ကျောင်းသားတွေ အားလုံးနီးပါး သိရှိထားပြီးသား စာမေးပွဲတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ Exams ( ၂ ) ခုလုံးက ကိုယ့်မှာ ရှိနေတဲ့ English language ability ကို စစ်ဆေးတဲ့ စာမေးပွဲတွေပါ။ IELTS ကို UK နဲ့ Australia တက္ကသိုလ်တွေ အတွက်အဓိက ဦးတည်ထားပြီး American နဲ့ Canadian universities တော်တော်များများကလည်း လက်ခံကြပါတယ်။ TOEFL ကိုတော့ American universities တွေက အဓိက အသုံးပြုပါတယ်။ American universities တွေက အဓိက အသုံးပြုတယ်လို့ ဆိုပေမယ့်လည်း UK နဲ့ Australia မှာ ရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်တွေကလည်း ဒီ Results ကို အပြန်အလှန်သဘောမျိုး လက်ခံကြတာလည်း ရှိပါတယ်။
IELTS ဆိုတာ International English Language Testing system ကို ခေါ်တာပါ။ IELTS ကို British Councils, the University of Cambridge, နဲ့ IELTS Australia ကနေ ကြီးမှုး ကျင်းပတာ ဖြစ်ပြီး British universities တွေ နောက် New Zealand နဲ့ Australian universities တွေနဲ့ အခြား ကျောင်းတွေက နိုင်ငံခြား ကျောင်းသား တစ်ယောက်ကို ကျောင်းမှာ လက်ခံနိုင်ဖို့ အတွက် ဒီရလာဒ်တွေကို ကြည့်ရှုသတ်မှတ် အတည်ပြုပေးပါတယ်။ သူ့မှာ အဆင့် သတ်မှတ်ချက် ( ၉ ) ဆင့် ရှိပြီး - သူတို့တွေက ဘာကို ဖော်ပြလဲ ဆိုရင် အဆင့်လိုက် အဆင့်လိုက် ဒီကျောင်းသားဟာ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ သူ့နိုင်ငံသား ပညာတတ် တစ်ယောက်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာနားလည်မှု အဆင့်အတန်းနဲ့ ဘယ်လောက်ထိ level ညီလည်း ဆိုတာကို ဖော်ပြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Tests ကို ဖြေဆိုမယ် ဆိုရင် ( reading, writing, listening နဲ့ speaking) ဆိုတဲ့ Skills ( ၄ ) မျိုးလုံးကို ဖြေဆိုရမှာ ဖြစ်ပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် အထက်တန်းကျောင်းသား ( ဘွဲ့ မရရှိသေးသူ ) တစ်ယောက် အနေနဲ့ သူတို့ကျောင်းတွေကို ဝင်ခွင့်ရရှိနိုင်ဖို့ အနည်းဆုံး overall score 5.5 ရရှိထားဖို့ လိုပါတယ်။ postgraduate ကျောင်းသား တစ်ယောက် ဖြစ်မယ် ဆိုရင်တော့ overall score 6.5 ရရှိထားဖို့ လိုပါတယ်။ IELTS exam တွေကို တစ်ကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ကျင်းပပေးတာ ဖြစ်ပြီး ဖြေဆိုချင်တယ်ဆိုရင် ဝင်ကြေးပေးသွင်း ဖြေဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ် လေ့လာချင်မယ် ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာကနေ သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
TOEFL ဆိုတာကတော့ Test of English asaForeign Language ဖြစ်ပြီး ETS ( Educational Testing Service ) လို့ခေါ်တဲ့ အစိုးရမဟုတ်သော US အခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းကနေ ကြီးမှုးကျင်းပတာ ဖြစ်ပြီး American နဲ့ Canadian universities အများစုက ဒီ ရလာဒ်ကို အတည်ပြုကြပါတယ်။ သူတို့ ( ၂ ) ဘယ်လိုပဲ ကွာခြား ကွာခြား ခုခေတ်မှာတော့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက ကျောင်းသား အတော်များများကတော့ TOEFL နဲ့ IELTS စာမေးပွဲ ( ၂ ) ခုစလုံးကို ဖြေဆိုထားနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြပါပြီ။ ဘာကို ဖြေဆိုထားသင့်မယ် ဆိုတာကတော့ ကိုယ်တက်ရောက်ချင်တဲ့ ကျောင်းပေါ်မူတည်ပြီး ဘယ်နိုင်ငံမှာ ရှိသလဲ ၊ သူတို့ကျောင်းတွေက ဘယ်ရလာဒ်ကို ကြည့်သလဲ ဆိုတာပေါ် မိမိဘာသာ ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ အကြောင်းကို အရှည်ပြောရရင် တော်တော်များမှာပါ။ ကျွန်တော်က IELTS and TOEFL exams တွေအကြောင်း ရှင်းပြချင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက IELTS and TOEFL exams တွေကို ဖြေဆိုဖို့ ပြင်ဆင်နေသူတွေ ၊ အခု မဟုတ်ရင်တောင် နောင်တစ်ချိန်မှာ ဖြေဆိုမယ်လို့ စိတ်ကူးရှိထားသူတွေအတွက် ဆောင်ထားဖို့ သင့်တော်မယ့် TOEFL IELTS Books Collection တွေကို ဝေမျှ ချင်လို့ပါ။
ကျွန်တော့်မှာ IELTS and TOEFL exams အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ စာအုပ်တွေ ရှိနေပါတယ်။
[Longman] Grammar Practice For Elementary (Longman).pdf
0582417066 - Grammar Practice For Elementary (Longman).pdf
Betty Azar - Basic English Grammar (2nd Ed).pdf
Elaine Walker (Longman) - Grammar Practice for Upper Intermediate Students 2000.pdf
English Grammar in Use-Reference and Practice for Intermediate Students of English.pdf
English Grammar Questions.pdf
English.Grammar - OUP - The Oxford Guide To English Usage.PDF
Oxford-Basic English Usage.pdf
Some Key Points Of English Grammar.pdf
Cambridge - English Vocabulary In Use.pdf
Cambridge - English Vocabulary in Use (2).pdf
Cambridge - English Vocabulary in Use (3).pdf
Cambridge, Oxford, Longman
Check Your Vocabulary For Ielts - Answer Key.pdf
English Grammar - Revision For Ielts Speaking Test.pdf
esl free practice reading exercises tests cambridge CAE certificate in advanced english.htm
esl free practice reading exercises tests cambridge CAE certificate in advanced english1.htm
How to prepare for IELTS - Speaking.pdf
IELTS - Exam samples - Reading.odt
IELTS - Exam samples - Reading(1).odt
IELTS - Exam samples - Reading(2).odt
IELTS - Exam samples - Reading(3).odt
IELTS Academic Reading.odt
IELTS General Training Reading.odt
PDF-Cambridge Practice Tests for IELTS 1.pdf
PDF-Cambridge Practice Tests for IELTS 2.pdf
Practice Tests for IELTS.pdf
Wiley, Webster's New World Essential Vocabulary (2005) YYePG OCR 7.0-2.6 LotB.pdf
Practice Reading B.pdf
Practice Reading C.pdf
Practice Reading D.pdf
Practice Reading E.pdf
Practice Reading F.pdf
Practice Reading G.pdf
Practice Reading H.pdf
Practice Reading I.pdf
Practice Structure B.pdf
Practice Structure D.pdf
Practice Structure E.pdf
Practice Structure I.pdf
TOEFL READING 500.hwp
အထက်ဖော်ပြပါ စာအုပ်တွေကို အလိုရှိမယ့် သူတွေအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ နေရာကနေ ရယူနိုင်ပါတယ်။
TOEFL IELTS Books Collection.part1.rar (95.4 MB)
TOEFL IELTS Books Collection.part2.rar (95.4 MB)
TOEFL IELTS Books Collection.part3.rar (63.3 MB)
Links တွေကို Multiupload ကနေပဲ ကျွန်တော်တင်ထားပေးပါတယ်။ Links တွေ ခဏခဏ ပျက်တာကို အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းထားချင်လို့ပါ။ IELTS and TOEFL exams နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အောင်အောင်မြင်မြင် ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။ ဖြတ်သန်းအောင်မြင်ပြီးခဲ့ရင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန် ပြန်လည်အကျိုးပြုနိုင်တဲ့ လူရည်ချွန်၊ လူရည်မွန်များအဖြစ် ရပ်တည် နိုင်ကြပါစေ။
10:33 PM LeaveaComment Read More
9:39 PM 1 comment Read More